Posted: May 9, 2010 in Review, Uncategorized
Tags: HipHopလူမှုရေးသူရဲကောင်းများ, KyawThu, Myanmar Hiphop
နာရေး Hip Hop သီချင်းဖြစ်ပေါ်လာအောင် Rapper (၁၀)ဦးအား စုစည်းအကောင်အထည်ဖော်ပေးသူ
Hip Hop အဆိုတော် ချစ်စိုးရဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)အပေါ် အမြင်
where can i get that song? anylink?
မြန်မာပြည် ရဲ့ သူရဲကောင်းတယောက် အဖြစ် အမြဲတမ်းဦးညွတ်နေပါ့မယ်
အရမ်းကိုလေးစားပါတယ် လူတွေမလုပ်နိုင်တဲ. အလုပ်ကို လိုလိုလား လား ကျေနပ်စွာနဲ.လုပ်နေတဲ.အတွက်အရမ်းကိုလေးစားရပါတယ်။
HIPHOP PARTY : 30th-MAY-MyaYeikNyo Hotel